Imibuzo Ebuzwa Njalo | Dredging | I-Ellicott Dredges
Yiziphi izinhlobo zesibopho oziqoqayo?
Sigcina cishe wonke umugqa wethu womkhiqizo ojwayelekile we-cutter suits dredges, esukela ku-8 ”(200 mm) Series 360SL Swinging Dragon® Dredge 8 ″ to the 20 ”(500 mm) Series 2070 I-Dragon® ukukhipha. Ama-dredges amakhulu namayunithi wesiko akhiwe ngoku-oda ngakunye kwamakhasimende.
Ngabe ngizodinga usayizi ongakanani ukuze enze umsebenzi wami?
Kuya ngezimo ezithile zephrojekthi. Sicela uqedele eyethu Umbonisi wamanani wedatha ukusenza sikwazi ukubuyekeza imininingwane yephrojekthi yakho nokunikeza isincomo esiphelele.
Ngabe ukungqubuzana nenjini enkulu kungadonsa kakhulu uphethiloli?
Akunjalo. Ukusetshenziswa kwamafutha kuxhomeke ikakhulu emikhakheni yokusebenza kwe-dredging, njengobuningi bezinto ezibonakalayo, ibanga lokupompa, kanye nokuphakama kwesiphelo.
Ngabe ama-dredges akho angampompela kuze kube nini?
Standard Ellicott® uchungechunge dredges babe nezinsimbi zenjini nezempompo ezikhethwe ukukhishwa okusebenzayo okuphakathi kuka-2,625 ′ (800 m) no-3,280 ′ (1,000 m).
Ingabe i-Ellicott inikezela nge-Anchor Booms ne-Spud Carriers?
Yebo. I-Ellicott inikeza ama-Anchor Booms namaSpud Carriers akhelwe uku-oda. Ngeminye imininingwane, sicela uxhumane no-Ellicott.
Ngabe ukujula kwakho kungafinyelela kubunani?
Sinikeza ngemigudu yokusika ejwayelekile enamakhono ahlukahlukene wokumba okusukela ku-20 ft. (6 m) kuze kufike ku-60 ft. (18.2 m), kuye ngemodeli yokudonswa phansi. Ngezicelo ezikhethekile, ukumba okujulile kungandiswa kakhulu.
Ngingazitholaphi izingxenye zokuphinda ngisele?
U-Ellicott ugcina uluhlu olukhulu lokufakwa esikhundleni izingxenye zophahla ezindaweni zethu zokukhiqiza zithunyelwa noma kuphi emhlabeni. Xhumana nomnyango wethu wezingxenye ku- +1 410 545 0239 noma izingxenye@dredge.com.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukwakha i-dredge?
Our ama-standard cutterhead dredges zitholakala ngokujwayelekile kusitoko, ngokuya ngaphambi kokuthengisa. Uma isitoko singatholakali, ukuqedwa okujwayelekile kuzoba yi-3 kuya ezinyangeni ze-4 ngemuva kokuthola i-oda. Ukulethwa kumishini emikhudlwana kuyahlukahluka kuye ngomkhiqizo owenziwe ngokomsebenzi.
Ngabe i-Ellicott ingavakashela indawo yethu yezitshalo noma yephrojekthi?
Imenenja yokuthengisa yesifunda iyatholakala ukuthi ihlangane nawe esizeni sakho noma ehhovisi lethu, kunoma yikuphi okulungile.
Kungani ingekho "imithetho yelamula" yokuvikela umthengi we-dredge?
"Umthengi makaqaphele akusona nje isisho, kepha iqiniso lapho uthenga noma uqasha idredge. Akukho ukuvikelwa, futhi umthengi kufanele athembele kumkhiqizi wokwehlisa. U-Ellicott akasoze adela ikhwalithi ngentengo. Ngaphezulu kwama-2,200 Ellicott® brand dredges akhiwe ngaphezulu kokugcina iminyaka 125. Amanye ama-brand brand e-Ellicott® asasebenza emhlabeni wonke ngemuva kweminyaka engu-50 + esebenza.